घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू कोलास-जनवरी हंटेलार बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "शिकारी"। हाम्रो क्लास-जनवरी हंटेलर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनीको तथ्याङ्कले तपाईका बचपनको समय बाट उल्लेखनीय कार्यक्रमहरूको पूर्ण खाता ल्याउनेछ। विश्लेषणमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि भएको छ।
हो, सबैले आफ्नो बहुमूल्य गोलाकारको फारमलाई थाहा छ। यद्यपि, केवल केहिले कोलास-जन हन्तालेरको जीवनीको बारेमा विचार गरेका छन् जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
कोलास-जन हन्तेलाल, नीदरल्याण्ड, भोर-ड्रेम्प्टमा अगस्त 12 को 1983th दिनको जन्म भएको थियो। उहाँ उनको आमा, माउड हन्टिलेजर र तिनका बुबा, डार्क-जन हन्तालालको जन्म भएको दोस्रो बच्चा हुनुहुन्थ्यो।
हंटेलर केवल6वर्षको उमेर हुँदा उनको परिवारले आफ्नो जन्मस्थानबाट भोर-ड्रेम्प्टोटोमा हम्मोलो भनिने एक गाउँमा चलेको थियो। यो गाँउमा हन्टिलेजरलाई मायालु र फुटबल खेल्ने उनको बुबा भाइ निके र युवा भाइ जेलको साथ थियो।
जवान डचले आफ्ना आमाबाबुलाई फुटबलको लागि आफ्नो प्रेमलाई प्रोत्साहन दिन प्रोत्साहन दिईयो, विशेषकर आफ्नो आमा जो फुटबलमा धेरै चासो थिएन तर विश्वासमा उनको छोराहरूको सहभागिता सार्थक थियो। हन्तालाकर उनको भाइहरू सँगै स्थानीय फुटबल टोली वीवी एच। एन। तिनका शब्दहरूमा
"मेरो कथा एच एन्ड कश्मीरमा सुरू भयो, मैले मैले गोल गर्दै गोल गरे र प्रो गरे। यो समर्पणको साथ सुरू भयो "
यस पल फुटबल भविष्यवाणी को क्यारियर बिल्डअप को नजरअंदाज गर्यो जसको पिता ले भन्यो कि प्रतिभाशाली उमेर देखि प्रतिभाशाली अधिकार थियो।
"उनी पाँच वर्षको उमेरमा स्थानीय क्लबमा गए, र तपाईंले तुरुन्तै कसरी प्रतिभाशाली देख्न सक्नुहुनेछ,"
2012 मा आफ्नो पिता डार्क-जन को सम्झना।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- क्यारियर बिल्डअप
Huntelaar6वर्ष को लागि स्थानीय क्लब VV H. en K. मा आफ्नो फुटबलिंग प्रतिभा विकसित गरे, डे Graafschap देखि स्काउट्स जो आँखा को पकडने प्रदर्शन प्रदर्शन को पेशकश उनको जब उनको 11 उमेर थियो!
डे Graafschap मा, हंटेलर रक्षा, मिडफील्ड, पंख, र यहाँ सम्म कि एक गोलकीपर जस्तै केहि पदहरूमा प्रयास गरे पछि आफुलाई अगाडि बढाउनुभयो !. लामो समय पछि, 33-20 सीजनको समयमा 1997 म्याचहरूमा क्लबको युवा पक्षका लागि 98 लक्ष्यहरूको स्कोरको लागि हंटेलर म्यासेजको गोल गर्ने उद्देश्यको रूपमा जानिएको थियो।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकमा फेम
हङकलाले आफ्नो अभियानलाई हानिकारक रूपले हानिकारक बनाइदियो, त्यसैले शीर्ष-फ्लाइट क्लबहरूले अनुगमनमा आफ्नो हस्ताक्षर प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गरे। पीएसवी संग शुरुवात जहाँ युवाहरु को क्लब को लागि 26 खेल मा 23 लक्ष्यहरु को स्कोर गरेर आफ्नो पहिलो सीजन मा एक अस्थिर योग्य हंटेलर प्रभावित भयो।
हङकङले पनि हेर्नु भएको थियो लीगको शीर्ष स्केलरले उनीहरूलाई पहिलो टोलीको साथ एक स्थान सुरक्षित गरे जहाँ उनले एक्सएनएनएक्सएक्समा आरबीसी रोसेन्डालमा जेएनयुमक्स-एक्सएनएक्सएक्सको जित हासिल गरे। यस समयमा 3-वर्ष-उमेर पछि फरक क्लबहरू लागेका थिए।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
पहिलो थियो डे Graafschap थियो जहाँ हंटेलर निराशाजनक वापसी भयो। तथापि, उनले दोस्रो डिभीजन टीम, एजीवीवीव (ऋणमा) मा छुट्याए, जहाँ उनले लीगको शीर्ष स्कोर गरे।
स्थिरता प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा सत्यको राम्रो प्रदर्शन थियो, AGVV सँग आफ्नो ऋणको अन्त्यमा हंटेलरले आफ्नो "ऋण मालिक" पीएसवीसँग अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मौका छोडे। उनीहरूको बजाय फेरिसियन क्लब हेरानेभेनको स्थानमा पुगेको थियो जहाँ उनले 17 म्याचहरूमा 31 गोल गरे र एक्सएनएमएक्स-एक्सएनएमएक्स यूईएफए कपको लागि उनको पक्षलाई पराजित गर्यो।
"हङकङ" को लागी सजिलै हराउनको लागी, अर्को खेलको पछि खेलको शीर्षमा रहिरहनेछ, परिणामस्वरूप धेरै क्लबले एएक्सएक्स सहित उनको खोजी गरे जसले9भित्र 2006 मिलियन यूरो को लागि प्रवर्द्धन गोल स्कोर सुरक्षित गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
हंटेलर को उनको लामो समय सम्म प्रेमिका मेडी स्कूलडरमैन संग सम्बन्ध मा2दशकहरु को नजिकै रहयो। प्रेमिकाहरू जसले किशोरीहरूको रूपमा डेटिङ गर्न थालेका छन् उनीहरूले स्कुलिङ दिनहरूमा राइटवेल्डमा भेट्थे जहाँ उनीहरूले प्रेमको बीउहरूलाई पूर्ण रूपमा उडेको सम्बन्धमा बोकेका छन्।
मितिलाई छिटो अगाडी तिनीहरू विवाहित छैनन् तर पहिले नै दुई बच्चाहरु सँगै सँगै छन्। तिनीहरूका पहिलो बच्चा सिब नामका केटा हुन्। उहाँ9अप्रिल 2009 मा जन्मनुभएको थियो। तिनीहरूको दोस्रो बच्चा अलेक्स 20 जुलाई 2011th मा जन्मिएको थियो। सूचीमा थपियो एक छोरी पुक (जन्मे6अगस्त 2013) साथै एक छोरा जिम (जन्मे2जनवरी 2017)।
आफ्नो संकल्पमा बोल्नु अझै विवाहित छैन, हन्तेलाले यसो भन्छिन्:
"म एक परम्परागत व्यक्ति होइन। मलाई महसुस गर्छु म पहिले नै विवाहित हुँ, विवाह बिना पनि। "
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
Huntelaar5सदस्यहरु को एक परिवार मा जन्मयो। हामी तपाईको परिवारको बारेमा विवरण ल्याउँछौ।
हन्तालालका बुबाको बारेमा: डिर्क-जन Huntelaar प्रचलित लक्ष्य स्केलर र फुटबल को एक प्रशंसक प्रशंसक को पिता हो। उहाँ आफ्नो छोराको क्यारियरलाई धेरै सहयोगको साथमा रहेको छ र शहर वरिपरि आफ्नो चालकको रूपमा सेवा गर्दछ। जब 2012 मा सोध्नुभयो किन उनी आफ्नो 29 वर्षीय छोरालाई किन चलाउनुहुन्छ, डार्क-ज्यानले हार्दिक रूपमा जवाफ दिए:
"किनकि म राम्रो चालक हुँ!"
त्यो तर यसको भाग हो डर्क-जन हानिकारक व्यक्तित्व। हंटेलरको रियल म्याड्रिडमा जानुभएको,3को हास्यास्पद पिता एक न्युयोर्क रिपोर्टरले लेखेका थिए जसले जान्न खोजे कि डच फर्वार्डको आमाबाबुले कसरी आफ्ना पुत्रहरू बारेमा समाचार प्राप्त गरे स्पेनिश भाषामा जान्छ। डार्क-जन जसले पूर्णतया राम्रो तरिकाले जान्थ्यो कि पत्रकारले कुनै सुनेको छैन भने हन्टेलरको आमाबाबुले भनेका कुरा बोल्दै थियो:
"मलाई थाहा छैन। हन्तालालका आमाबाबुबाट मैले सुनेको छु"।
हंटेलर आमाको बारेमा: हंटेलरको आमा माड परिवारको मात्र सदस्य हो जुन फुटबलमा रुचि छ। तिनका चासोहरू भित्रै छन् चित्रकारी, संस्कृति र जनावरहरू। यद्यपि, उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीको खेल प्रयासहरूको समर्थन गर्छन्।
हन्तेला भाइहरूको बारेमा: हंटेलरका भाइहरू निके र जेले हुन्। निको भाइबहिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो हुनुहुन्छ। उहाँले एकपटक 2016 मा पक्राउ गरेको थियो हंटेलरको छेउमा शल्कले र डर्टमन्डको बीचमा एक फिट म्याच पछि। उनको गिरफ्तारीका कारणहरू आरोपहरू वरिपरि केन्द्रित थिए कि उनी फेंकिरहेका थिए डर्टमुन्डको प्रशंसक विरुद्धको स्टोन पछि।
अर्कोतर्फ हो हंटेलरको सानो भाइ जेल। परिवारको सबैभन्दा सानो सदस्य हन्तेलेजर जस्तै धेरै देखिन्छ कि मान्छेले उनलाई प्रवास्तविक स्ट्राइकरको लागि भ्रष्टाचार गर्छन्।
जेली, तथापि, यो वास्तवमा मान्छे को बारेमा बताउन कर्तव्य को एक बिन्दु बनाउँछ।
"म सधैं ईमानदारीपूर्वक भन्न चाहन्छु कि म कलास-जनवरी होइन, तर अझै पनि मानिसहरु यो एक तस्वीर लिने धेरै राम्रो छ, राम्रो छ, म मात्र यो गर्छु"।
हंटेलरको सम्बन्धको बारेमा: सार्दै तत्कालीन परिवारबाट टाढा हन्तालाल सम्बन्धमा उनको चाचा हन्स, चाची हटी, भतीजा निको र हन्ड्रिक पनि साथ साथै कानून निको समावेश छ।
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- उपनाम पछिको कारण
हंटेलर लामो उपनामको रूपमा चिनिन्छ "हंटर", देखि 2004। वास्तवमा, उनको पूर्व-क्लब अनुसूचित जाति स्क्यान हेननेभेनका प्रशंसकको एक विशाल पोस्टरको लटमा लियो उनको हातमा एक बन्दूक संग शीर्ष स्कोरर। यद्यपि, हंटेलरले निकको साथ कुनै समस्या छैन किनकि उसले यसको पछिल्ला कारणले बताउँछ:
मलाई "हंटर" मनपर्छ। यो एउटा नाम हो जुन म यसको पहिचान गर्न सक्छु। आखिर, म सधैँ खोज्न चाहन्छु र लक्ष्यहरू गोल गर्न चाहन्छु.
कोलास-जन हन्तालायर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन तथ्य
हंटेलर एक शान्तिपूर्ण र सद्भावपूर्ण खोजी गर्ने व्यक्ति हो जसले सबै कुराभन्दा माथिको तिनको प्रयासको दृढतालाई स्थिर बनाउँछ। उनीहरूलाई जीवनको ओलिवर क्यानको आदर्श वाक्य अपनाएको छ भन्नको लागि पर्याप्त छ: जानुहोस्, जाँदैछ !. जब हंटेलर खेतको मैदानमा छैन उनी मित्र र परिवारसँग लटकाउँछन् र विशेष अवसरमा आफ्ना भाइबहिनी वा पत्नी र छोराछोरीसँग शिविर जान्छन्।
यद्यपि हन्तेलाकरले आफ्नो क्यारियरमा महानता हासिल गरेका छन्, उनीहरूले महत्त्वपूर्ण स्तरको गोपनीयता प्रयोग गरेर उहाँलाई धेरै कल्पना गर्न छोड्छन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो क्लास-जनवरी हन्टिलायर पढाइको लागि धन्यवाद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।